Sambo mpiambina nanafika tao amin'ny Golfa Guinea, naka tantsambo 13
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Sambo mpiambina nanafika tao amin'ny Golfa Guinea, naka tantsambo 13
Nanafika ilay sambo mpamono simika Curacao Trader tokony ho 210 kilaometatra (manodidina ny 338km) miala ny morontsirak'i Benin, any amin'ny Helodrano afrikana Andrefana, anio, hoy ny mpandraharaha grika ao amin'ilay sambo, hoy ny Maritime Bulletin.
Niditra an-tsambo ireo nahavanon-doza mitam-piadiana ary naka an-keriny ny “13 tamin'ireo mpiasan'ny ekrianina 19 Ukranianina sy Rosiana.” Miala sasatra ny sambo taorian'ny fanafihana, noho ny tsy fisian'ny mpiasa, fa nisy sambo hafa kosa nalefa hanampy azy.
Ny Golfa Guinea, izay voahodidin'ny firenena mpanondrana solika valo, dia nanjary fantsom-piraty lehibe indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tamin'ny taona 2019, dia nahatratra 90 isan-jaton'ny fakana an-keriny an-dranomasina io, hoy ny Birao iraisam-pirenena momba ny ranomasina.
Horohorontany mafy no namely ny faritry ny Nosy Samoa
Mandray ireo mpizahatany i Dominica manomboka amin'ny 7 Aogositra, nanambara ny kaonty fidirana